धनतेरसमा मात्र कुचो किन्नुभयो भनेपनि चम्किनेछ भाग्य, जान्नुहोस् मत्स्य पुराण
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » धनतेरसमा मात्र कुचो किन्नुभयो भनेपनि चम्किनेछ भाग्य, जान्नुहोस् मत्स्य पुराण
एजेन्सी । धनतेरसमा धेरै चीजहरू किनिन्छन्। जस्तै भाडा, सुन, चाँदी, जग्गा, घर र सवारी साधन ।
तर यी सबै बाहेक एउटा विशेष वस्तु हो झाडू (कुचो) जुन धनतेरसको दिन किन्न आवश्यक मानिन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ यस्तो किन गरिन्छ ?
यदि होइन भने यो लेख तपाईलाई धेरै उपयोगी छ। त्यसोभए हामी यो किन गर्छौं र मत्स्य पुराणले यसको बारेमा के भन्छ ?
मत्स्य पुराणका अनुसार कुचो (झाडू) लाई देवी लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ। साथै बृहत संहितामा कुचोले सुख–शान्ति बढाउने र गरिबी हटाउने मानिन्छ। यति मात्र होइन, धनतेरसको दिन घरमा नयाँ कुचो ल्याएमा धनसम्पत्ति सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्ने जनविश्वास रहेको छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार धनतेरसको दिन जतिबेला कुचो किन्नुहोस्, त्यसको संख्यामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। धनतेरसको दिन तीनवटा झाडू किन्नु निकै शुभ मानिन्छ । तर जोडीमा, अर्थात् दुई वा चार संख्यामा कुचो किन्नबाट जोगिनुहोस्।
यदि तपाई धन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने धनतेरसको दिन यसका लागि कुचो किन्नुहोस्। यसपछि दीपावलीको दिन सूर्योदय हुनुअघि मन्दिरमा दान गर्नुहोस्। यसो गर्नाले घरमा सदैव लक्ष्मीको वास हुने जनविश्वास रहेको छ ।